नतिजा नआउँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई औपचारिक बधाई ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
नतिजा नआउँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई औपचारिक बधाई !
एजेन्सी । भारतमा विभिन्न चरणमा भएका लोकसभा चुनाव आइतबार सम्पन्न भएको छ । नतिजा आगामी २३ मे मा आउने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
तर नतिजा आउनु अघि नै मल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई सन्देश पठाएका छन् । सन्देशमा उनले माल्दिभ्स र एनडीए सरकारबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर र फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मतगणनाको नतिजा नआएपनि चुनावी मत सर्वेक्षणहरुले भने एनडिएले बहुमत प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसैलाई आधार मानेर पूर्व राष्ट्रपति नासिदले ट्वीट गरेका छन्, चुनाव सकिएलगत्तै नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीलाई बधाइ दिन चाहन्छु, माल्दिभ्सका जनता र यहाँको सरकारसँग मोदी र एनडीए सरकारसँगको सम्बन्ध अझ बलियो र फराकिलो हुने विश्वास गर्दछु ।
Previousमहिलाका यी १० कुरा गलत बुझ्छन् पुरुष
Nextबिहे गरेको चार महिनामै श्रीमानले अर्कै लिएर हिँडेपछि…